Viber: Free Messages & Calls v 4.1.0.665 for android(latest version) - .::just for share::.
Home » android » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » Viber: Free Messages & Calls v 4.1.0.665 for android(latest version)
Viber: Free Messages & Calls v 4.1.0.665 for android(latest version)
Android Phone/Tablet သမားများအတွက် ဒီဇင်ဘာလ (၇)ရက်၊ ၂၀၁၃နေ့မှ ထွက်လာတဲ့ Viber New Version v 4.1.0.665 ဖြစ်ပါတယ်..Viber ဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ ရေရေလည်လည် ကိုလန်းပါတယ်။ ယခု version မှာ viber ဆော့ဝဲရဲ့အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းလည်းတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဖုန်း free call ကို HD sound နှင့် ပြောနိုင်တာ ၊ Message Free ပို့နိုင်တာ ၊ Group chat ပြောနိုင်ရုံတင်မက အခြား Featuresတွေလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်လာပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကအခု version အသစ်မှာ Video File တွေကိုပါ Share လိုရသလို Voice message ချန်ထားနိုင်တာ၊Sticker အသစ်များစွာပါဝင်လာပါတယ်..အခုအသစ်ထွက် ဗားရှင်းမှာ contact ကိုလည်း အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်လိုက် ထားရှိနိုင်တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..ရယူအသုံးပြုလိုသူများ ဒီမှာ မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်..
Labels: android, android ဖုန်းဆိုင်၇ာ